Asa an-kalamanjana tsara indrindra any Kildare - IntoKildare
fianakaviana, Mpankafy any ivelany, Zavatra tokony hatao
Miahy any Kildare ho an'ny fiadanam-po isika
Kildare dia feno hatsaran-tarehy mahafinaritra be dia be ary ao anatin'ny 5kms isaky ny misy làlana ala na fitsangatsanganana natiora ho hita. Ny fivoahana any ivelany sy ny fanaovana fanatanjahan-tena amin'ity toetrandro fararano vaovao ity sy mahavariana dia tsara ho an'ny fo sy ny saina rehefa manao fanatanjahan-tena, ary koa mitazona anao ho salama, mamoaka endorphins izay hanampy ny olona hijanona ho tsara. Mandria am-pialan-tsasatra avy any amin'ny biraon'ny tranonao mandritra ny fotoana antoandro antoandro na ento ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana an-toerana any an-tsaha maitso sy ny sary voajanahary voaforon'ny ala manodidina an'i Kildare. Mametraha piknik, fonosana mafana ary zahao ireo harena voajanahary natolotr'i Kildare ho anao.
Lahatsoratra zarain'i 𝔸𝕟𝕟𝕖 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕖 𝕊𝕠𝕞𝕖𝕣𝕤 🇮🇪 (@amsomers_photos)
Vetivety kely fotsiny ivelan'ny tanànan'i Rathangan no misy ny tsiambaratelo nafenina tsara indrindra ho an'ny natiora! Killinthomas Wood ao amin'ny County Kildare dia toy ny zavatra mahitsy avy amin'ny angano ary iray amin'ireo ala mahavariana indrindra eran'i Irlanda rehetra! Ny velaran-tany 200 hektara dia ala mikitroka matevina mifangaro miaraka amin'ny zavamaniry sy biby maro karazana. Misy manodidina ny 10 km ny diany vita sonia amin'ny ala ho an'ireo mpankafy fitsangantsanganana rehetra, ary manome fidirana amin'ny tontolo iainana isan-karazany izy ireo.
Lahatsoratra iray nozarain'i tazt.photos (@ tazt.photos)
Any amin'ny 30 minitra mahery eo ivelan'ny tanànan'i Kildare no misy ilay Valan-javaboary ala Donadea. Misy lalan-tongotra telo misaraka, manomboka amin'ny 1km ka hatramin'ny 6km, misy zavatra mifanaraka amin'ny sokajin-taona rehetra eto. Mandritra ny fitsangantsanganana antoandro fohy dia araho ny Lake Walk, izay mitsangantsangana manodidina ny farihy feno rano, ary tsy mihoatra ny antsasak'adiny. Eo ambanin'ny 2km fotsiny ny Nature Trail, izay mamakivaky ny sasany amin'ireo maritrano manaitra ny tany. Ho an'ireo mpandehandeha maniry fatratra, ny Aylmer Walk dia lalana 6km Slí na Slainte izay mitondra mpandeha an-tongotra manodidina ny valan-javaboary.
Lahatsoratra zarain'i Ewen Cameron (@ ewen1966)
Ankafizo ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro amin'ny moron'ny iray amin'ireo renirano malaza indrindra any Irlandy, ny River Barrow. Miaraka amin'ny zavatra mahaliana isaky ny mandeha amin'ity towpath 200 taona ity, ity renirano ity no mpiara-dia tonga lafatra ho an'izay mandeha sy bisikileta manamorona ny Barrow Way. Alao ny zava-maniry sy ny biby hita eny amoron'ny morony, ny hidin-trano mahafinaritra sy ny tranon'ny mpiambina hidin-trano tranainy.
Lahatsoratra iray nozarain'i Sadie Basset (@ sadie.basset)
Làlana iray mitovy amin'ny lalana Barrow Way, ity dia an-tongotra an-tongotra ity, Ny làlan'ny mpanjaka dia tsara ho an'ireo izay te-hisotro kafe maka ary handeha foana. Mandeha lavitra araka izay itiavanao azy dia afaka mitsambikina mora foana amin'ny fitateram-bahoaka ianao mba hamerenanao ny fiatombohany. Misy ohatra maromaro manan-danja amin'ny arkeolojia indostrialy tamin'ny faramparan'ny ambin'ny folo ambin'ny folo taona mba hankafizin'izy ireo eny an-dalana, ao anatin'izany ny Ryewater Aquaduct izay mitazona ny lakandrano avo ambonin'ny reniranon'i Rye, ary naharitra enin-taona ny fananganana azy.
Lahatsoratra iray nozarain'i Scott H. Smith (@ scottsmith02)
Any amin'ny faritra atsinanana atsinanan'i Irlandy no faritany Kildare Monastic Trail, ivon'ny fiandohan'ny Kristianisma tany Irlandy. Io lalana tsara tarehy io dia mampifangaro ny tsara indrindra amin'ny natioran'i Irlandy ary koa ny tantarany miavaka taloha. Maninjitra avy any Castledermot mankany Oughterard akaikin'i Straffan, ity lalana mirefy 92km ity dia hitarika anao any amin'ny rava atmosfera monasiteran'ny taona taloha, tilikambo boribory ary hazo fijaliana avo rusty efa tonta. Ny torolàlana audio maimaim-poana dia azo alaina mba hanampy anao handalina lalindalina kokoa ny tantaran'ny monasita taloha any Irlandy.
Miorina 370 kilaometatra toradroa mankany amin'ny kaominin'i Meath, Offaly, Kildare, Laois ary Westmeath, ny Bog of Allen dia boaka natsangana izay nofaritana ho ampahany lehibe amin'ny tantaran'ny natiora Irlandy toy ny Book of Kells. Ny dibera, ny farantsakely, ny Elk Irlandey lehibe ary ny lakana namboarina taloha dia sasany amin'ireo zavatra mahaliana izay azo tamin'ny toerana voatahiry avy any amin'ny hantsana.
Lahatsoratra iray nozarain'i shannon kearney (@shannonstudio_)
Pollardstown Fen, akaikin'i Newbridge dia faritra iray amin'ny tanin-dranomasina misy alkaline izay mihoatra ny 220 hektara ary mahazo ny otrikaina avy amin'ny rano loharano be kalsioma. Amin'ny ankapobeny dia eo ambanin'ny tompon'ny fanjakana izy io, manan-danja iraisam-pirenena ary ahitana karazana zavamaniry tsy fahita firy, miaraka amin'ny rakitsary tsy misy fanelingelenana momba ny fiovana amin'ny fitambaran'ireo zavamaniry miverina amin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany.
fianakavianaMpankafy any ivelanyZavatra tokony hatao
Hevitra ho an'ny rainao ho an'ny rainao Kildare